Raheem Sterling oo dabaqada sare kasoo galay liiska xidigaha ay dooneyso Real Madrid – Gool FM
Dajiye March 16, 2019
(Real Madrid) 16 Marso 2019. Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa sheegay in Real Madrid ay dib u soo cusbooneysiisay xiisaheeda ku aadan xidiga Manchester City ee Raheem Sterling, kadib dib ugu soo laabashada Zinedine Zidane ee tababarka kooxda.
Macalinka reer France ee Zinedine Zidane ayaa la fahansan yahay in si weyn uu ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka xidiga caalamiga ah ee Raheem Sterling,.
Real Madrid ayaa isku diyaarineysa in Zinedine Zidane ay gacanta u galiso qiimo dhan 300 milyan oo ginni, si uu ugu xoojiyo safka kooxda, isla markaana uu ku sameeyo saxiixyada magacyo ay ka mid yihiin Neymar Jr, Hazard, Eriksen iyo kuwo kale.
Raheem Sterling ayaa ku soo laabtay liiska ciyaartoyda lala xiriirinayo kooxda Real Madrid, kadib bandhiga cajiibka ah uu xili ciyaareedkan ka sameeyay Manchester City, taasoo ka dhigtay inuu noqdo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican horyaalka Premier League.
Qaab ciyaareedka Raheem Sterling ayaa soo jiitay kooxda Real Madrid tan iyo 2014-kii, waxayna ahayd markii ugu horeysay ay isku dayaan inay sameeyaan saxiixiisa, hadana markale ayay isku dayeen bishii August ee lasoo dhaafay.
Zidane ayaa sidoo kale cod sare ku qiray xili hore inuu jecel yahay Raheem Sterling, waxayna ahayd sanadii 2015-kii markii uu yiri: “Dabcan waxaan u daawanaa isaga ciyaaryahan ahaan”.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa dhaliyay sanadkan 21 gool, wuxuuna sameeyay 12 caawinaad, xili Manchester City ay rajo wanaagsan ka qabto in xili ciyaareedkan ay ku guuleysato Champions League.
Yeelkadeed, wax sahlan ma ahan in Manchester City ay ku qanacdo inay iska fasaxdo 24 jirkan, xili uu saxiixay heshiis gaaraya ilaa iyo 2023 bishii November ee lasoo dhaafay, wuxuuna mushaar ahaan u qaadan doonaa £ 300,000 toddobaadkii.
“Rumeyso Ama Ha Rumeysan, waxaan ka baqay in Ronaldo uu jawi jah wareer ah ka abuuro qolka labiska”